Umbuzo Falcon50 sasilokhu
Ngiyabonga wathola: 4
iminyaka 3 2 Sekwedlule amaviki #138 by FvS
Ngililande FSX i-747 Airforce One ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ...
Egumbini labashayeli ngaqaphela Falcon 50 sasilokhu module, iphaneli noma yini abake igama kuyinto ...
Ngingakwazi ukusebenzisa thisFalcon50 sasilokhu yezinye yendiza futhi futhi yini okudingeka ngikwenze ukuze uthole lokhu kwezinye yami yendiza ukusebenza, akukho muntu omazi ...... ?????
bona izinanyathiselwa ....
iminyaka 3 2 Sekwedlule amaviki #139 by FvS
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Gh0stRider203, luis1245
3 iminyaka 1 iviki eledlule #168 by Gh0stRider203
YEBO! Ungakwazi. Sengikwenze phambi Mina. kube okwesikhashana kodwa ngethemba ukuthi lokhu kuyasiza ...
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: FvS
3 iminyaka 1 iviki eledlule #169 by Gh0stRider203
btw sorry for ayiphenduli ngokushesha. Angibonanga okuthunyelwe kwakho. Iphutha lami
3 iminyaka 1 iviki eledlule #174 by FvS
Thx okuningi impendulo, ngizozama ukuyixazulula ....
3 iminyaka 1 iviki eledlule #175 by Gh0stRider203
Ngikufisela inhlanhla! Lemme ukwazi ukuthi sihloko nhlobo eziwusizo. Njengoba ngishilo, sengikwenze ngaphambi ... kodwa kube okwesikhashana lol
3 iminyaka 1 iviki eledlule - 3 iminyaka 1 iviki eledlule #176 by FvS
Gh0stRider203 wabhala: Inhlanhla! Lemme ukwazi ukuthi sihloko nhlobo eziwusizo. Njengoba ngishilo, sengikwenze ngaphambi ... kodwa kube okwesikhashana lol
Ngakwazi ukuthola Falcon50 sasilokhu iphaneli kwezinye ezindizeni, manje angikwazi ukundiza nge indiza isihenqo esigcwele futhi usebenzise Falcon50 sasilokhu endaweni sub-screen kancane phansi ... Bheka isithombe ..greetings enamathiselwe kusukela Netherlands .....
Ukuhlela kokugcina: Iminyaka engu-3 engu-1 ngesonto eledlule FvS.
Isikhathi ukudala page: 1.607 imizuzwana